Elon Musk kuSNL inotaura nezve Dogecoin, uye doge inodonha (Chivabvu 8, 2021) - Cazoo
musha » musha » Elon Musk kuSNL inotaura nezve Dogecoin, uye doge inodonha (8 Chivabvu 2021)
Elon Musk, CEO weTesla uye SpaceX, makambani maviri akabudirira enguva yedu yehunyanzvi, anga ari mubati (co presenter) wechikamu cheyakakurumbira American comedy show Saturday Night Live. Chikamu chakaburitswa manheru eMay 8, 5.30 am nguva yeItaly.
Elon Musk naamai Maye Musk
Zviripachena, semutsigiri mukuru, akataura mumazuva apfuura kuti angadai akataura nezve Dogecoin, munhu wese anofarira cryptocurrency meme. Uye munhu wese akafunga kuti… 🚀
Pane kudaro, iyo chati haina tsitsi: Mutengo waDogecoin wakatanga kudonha panongopera monologue yayo, ine yakanaka tsvuku candelona, ​​ichibva kubva $ 0,66 kusvika $ 0,53 muawa.
Dogecoin mutengo, nguva yakatarwa 1h
Pakati peimwe yezvikamu zvine mukurumbira kwazvo, yeWikiend Gadziriso yakaitika kare yakagarwa nevanhu vengano vakaita saNorm McDonald, Musk akazvizivisa semurume anoshaya mari yemuratidziro, Lloyd Ostertag, uye akabvunzwa kuti atsanangure chaizvo kuti Dogecoin chii.
"Thanks Michael, ndishevedze Iyo Doge baba," Musk akaudza Michael Che.
"(Dogecoin) akatanga seinternet meme-based joke, asi ikozvino yabvisa munzira chaiyo," Musk akatsanangura.
Ndiani akazodzokorora kubvunza Musk kuti chaive chii chaizvo, achidhonza dhora kubva muhomwe yake uye achiizunguzira pasi pemhino dzaMusk, achitomubvunza kana iyo cryptocurrency yaive yechokwadi.
"Ichokwadi sedhora irori," akadaro Musk.
Colin Jost akasvetukira mukuita, achitobvunza kuti Dogecoin aive chii chaizvo.
"Ndiyo ramangwana remari, imotokari yemari isingamiswe ichatora nyika," akadaro Musk.
Uye paakatsanangura kuti macrypto mari inogona kuchinjaniswa nemari, Che akati, "Hoo, inyonganiso." (iri mhirizhonga!)
"Ehe, imheremhere," akadaro Musk achiseka achishevedzera "kumwedzi!" (Kumwedzi! 🚀)
Iwe unoda here kuona vhidhiyo? Hezvino izvi:
heino clip yaelon musk achitsanangura kuti doge mari iri paSNL… .akati chinyararire 😂 pic.twitter.com/iyXbKH0FPZ
- niffauw (@RustigNiffauw) Dai 9, 2021